Hotelslọ oriri na ọ 20ụ XNUMXụ XNUMX abanye na Hotels nke America
Location: Mbido » Ịdee » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Hotelslọ oriri na ọ 20ụ XNUMXụ XNUMX abanye na Hotels nke America
Historic Hotels nke America ewebatala ụlọ oriri na ọṅụṅụ 20 mere eme n'ime otu na 2017.
Eziokwu na-atọ ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Kemgbe 1771, Inn abụrụla ebe ndị ọbịa a na-akwanyere ùgwù, dị ka George Washington, Benjamin Franklin, na General Lafayette na-eme njem ugbu a.
• Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Willow Grove* (1778) Orange, Virginia
Hotel fun eziokwu: N'oge Revolutionary War Generals Wayne (Georgia) na Muhlenberg (Pennsylvania) mara ụlọikwuu na Willow Grove n'oge ndịda mkpọsa iji nyere Marquis de Lafayette aka ịmanye British ịtọhapụ.
Eziokwu na-atọ ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Na mbụ ụlọ a bụ ụlọ nkwakọba ihe owu na-agafe njem ihe mere eme nke Savannah.
• Sherman (1852) Batesville, Indiana
Hotel fun eziokwu: German J. Brinkmann wuru ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya na 1852 na-akpọ ya na 1865 iji sọpụrụ General Sherman na 83rd Indiana Volunteer Infantry, onye jere ozi Sherman na Agha Obodo.
Eziokwu na-atọ ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Philadelphia Inquirer kpọrọ ya "ihe bara nnukwu uru nke Roosevelt Highway." N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, Corning Glass na-arụ ọrụ, onye bu ya ụzọ na Corning Inc. mere ememe ekeresimesi ya n'ụlọ nkwari akụ, na ekele, gosipụtara akara ngosi American Flag nke ihe ịchọ mma ekeresimesi 1,438 nke a pụrụ ịhụ taa n'ime ọnụ ụlọ.
Ezigbo obi ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Antrim 1844 nwere njikọ chiri anya na Gettysburg, dịka General Meade nọrọ n'ụlọ a mere eme n'abalị nke June 30, 1863, n'oge Agha Obodo. Ọ bụbu ọchịagha nke ndị agha Potomac naanị ụbọchị abụọ tupu agha amalite. General Meade gara n'ihu merie Robert E. Lee na Gettysburg.
Hotel fun eziokwu: Hotel del Coronado, Curio Collection nke Hilton, nwere mbụ mbuli elu atọ ka na-arụ ọrụ, gụnyere birdcage elevator Otis #61 nke a na-arụ ọrụ site uwe mbuli ọrụ.
• Hyatt na Bellevue * (1904) Philadelphia, Pennsylvania
Hotel fun eziokwu: Na 2009, niile anọ balconies n'èzí cafe na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na 19th floor nke Hyatt na Bellevue e weghachiri eweghachi na meghere ọha na eze, na-enye anọ kasị ihunanya tebụl iri nri na kasị elu n'èzí iri nri na Philadelphia.
• DoubleTree nke Hilton Hotel Utica (1912) Utica, New York
Eziokwu na-atọ ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Hotel Utica bụ saịtị nke mmanya mbụ erere mmachibido iwu. FX Matt Brewery dị nso mere njem nlegharị anya na họtel ahụ wee malite ijere Utica Club ozi ụbọchị mmachibido iwu ahụ kwụsịrị, Disemba 5, 1933.
• Virginian Lynchburg, Curio Collection nke Hilton (1913) Lynchburg, Virginia
Ezigbo obi ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Ndị ọbịa a ma ama gụnyere onye na-eme ihe nkiri Ronald Reagan, bụ onye kwụsịrị na nkwari akụ ahụ n'oge njem ndọrọ ndọrọ ọchịchị na 1957.
Ezigbo obi ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Onye nwe mbụ Bill Hahn ama ama ụbọchị ọmụmụ bash na July 1962 gosipụtara ntụrụndụ site na Barbra Streisand, onye pụtara n'oge okpomọkụ ahụ na mmepụta Broadway mbụ ya.
Eziokwu na-atọ ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Osisi fig Moreton Bay mara mma dị na Fairmont Miramar Hotel & Bungalows gbara ihe karịrị afọ 140 na karịa 80 ụkwụ ogologo.
• Hotel Skyler Syracuse, Tapestry Collection nke Hilton (1922) Syracuse, New York
Eziokwu na-atọ ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Ojiji mbụ ụlọ ahụ bụ ụlọ nzukọ na nso nso a bụ ebe ndị otu ihe nkiri Salt City nwere maka nka.
Eziokwu na-atọ ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Na 1924, Seattle Times nwere asọmpi na-enye $50 maka aha kacha mma. Enyere ndenye 3,906, na ntinye 11 gụnyere otu aha, The Olympic, nke ahọpụtara.
Eziokwu na-atọ ụtọ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Na mmalite 1800s, saịtị ahụ bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ Washington kachasị mma ma bụrụ ebe obibi nke Onye isi ala Andrew Johnson yana Woodrow Wilson tupu e wepụta ya.
• Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Queensbury (1926) Glens Falls, New York
Hotel fun eziokwu: Robert F. Kennedy kwere nkwa ịlaghachi na Glens Falls mpaghara mgbe 1964 ntuli aka maka Senator. Ụbọchị mgbe o meriri, ọ gara nri ehihie na họtel.
• Hotel Saranac, Curio Collection nke Hilton (1927) Saranac Lake, New York
Eziokwu na-atọ ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Ihe ngosi akara ngosi dị na obodo Saranac Lake, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ejirila nlezianya weghachi ma rụzigharịa ya ka ọ na-ejigide ọmarịcha akụkọ ihe mere eme na ihe owuwu na-adọrọ adọrọ - gụnyere nnukwu Ụlọ Nzukọ, nke sitere n'ike mmụọ nsọ Ịtali nke narị afọ nke 14.
• Statler (1956) Dallas, Texas
Eziokwu na-atọ ụtọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Statler kwadoro ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri na-ewu ewu n'oge gara aga, gụnyere Elvis Presley. Ụlọ ọrụ Statler Hotels bụ nke mbụ wuru Statler na Dallas (nke tọrọ ntọala na 1907). Ụlọ oriri na nkwari akụ Statler ndị ọzọ ewebatara n'ime Historic Hotels nke America n'afọ ndị gara aga gụnyere Boston Park Plaza, Omni William Penn, na The Capital Hilton Washington DC.
• Alpenhof Lodge* (1965) Obodo Teton, Wyoming
Hotel fun eziokwu: The Alpenhof Lodge, e depụtara na National Register of Historic Places na 2016. Alpenhof, ụlọ mbụ e wuru na Teton Village, na-echebe ya Bavarian-nketa style yiri ndị na ọtụtụ Alpine ski ebe ebe.
• Graham Georgetown (1965) Washington, DC
Eziokwu na-atọ ụtọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ: A na-anụ kepu kepu Graham Georgetown na ọ bụbu onye na-anọkarị na Frank Sinatra, onye nwere otu ụlọ na-etu ọnụ ụlọ buru ibu.
Isii n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị mere akụkọ ihe mere eme bụ ọrụ mmeghari eji eme ihe nke gụnyere ịtụgharị ụfọdụ ma ọ bụ ihe niile nke ụlọ akụkọ ihe mere eme ka ọ bụrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Na mbụ, e wuru ụlọ ndị a maka nzube ọzọ. Ọmụmaatụ gụnyere ụlọ nzukọ, ụlọ nkwakọba ihe owu, ụlọ ọrụ arịa ụlọ, ụlọ ọfịs, ụlọ ime ụlọ na ụlọ akwụkwọ.
Boston California Christmas Company Dallas Hotel Hyatt Indiana Ndị njem Maryland Massachusetts Pennsylvania Philadelphia Resort Seattle Sofitel Spa Texas agha Washington, DC
Ọdụ ụgbọ elu Cornwall Newquay UK nke na-eto ngwa ngwa na UK maka afọ nke abụọ